Androy sy Anosy: Ho tohanan’ny PAM sy Fihariana ny fikambanan’ny tantsaha – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 1:30
Accueil/Toekarena/Androy sy Anosy: Ho tohanan’ny PAM sy Fihariana ny fikambanan’ny tantsaha
Androy sy Anosy: Ho tohanan’ny PAM sy Fihariana ny fikambanan’ny tantsaha
Natao omaly teny amin’ny biraon’ny PAM Ambatoroka ny fanaovan-tsoniam-piarahamiasa eo amin’ny PAM sy Fihariana, mba entina hanohanana ny asa aman-draharahan’ny fikambanana sy fivondronan’ny tantsaha any amin’ny faritra Androy sy Anosy.
Natao omaly teny amin’ny biraon’ny PAM Ambatoroka ny fanaovan-tsoniam-piarahamiasa eo amin’ny PAM sy Fihariana, mba entina hanohanana ny asa aman-draharahan’ny fikambanana sy fivondronan’ny tantsaha any amin’ny faritra Androy sy Anosy. Ireo fikambanana ireo izay efa miara-miasa amin’ny PAM ihany amin’ny fiatrehana ny fahavitana-tena ara-tsakafo. Ity tetikasa natao sonia ity dia entina hamatsiam-bola ireo tantsaha mba ho afa-mamokatra sy hampivoatra ny asany ka hahavelo-tena. Nilaza ny tale sady solon-tena maharitry ny PAM fa ity fiaraha-miasa ity dia hanampiana ireo mpamokatra madinika any Atsimo. «Miasa mafy ireo mponina any an-toerana, indrindra amin’ny hai-tany. Tanjona ny hahafahan’izy ireo mivelona ary mampivoatra ny kalitaon’ny vokatr’izy ireo », hoy izy.
Nanamafy ny Sekretera mpanatanteraka Fihariana, Zafindravaka Valérie, fa tsy miala amin’ny velirano nataon’ny Filoham-pirenena, Rajoelina Andry, ny Fihariana izay tetikasa nasionaly hanampiana ny mpandraharaha malagasy, mamaly ny filan’ny mpisitraka sy ireo vondrom-bahoaka ifotony. « Misehatra amin’ny fampivoarana ny orinasa, ny toekarena, kanefa mijery ny mahaolona, ary koa miaro ireo orinasa voafantina sy ny vola niandraminy ny Fihariana. Ny Faritra rehetra izay manan-jo hitovy avokoa amin’ny lafiny fampandrosoana ara-toekarena. Ny Fihariana izay manohy ny asany mba hahatrarana ny velirano roa, mifototra amin’ny fahavitan-tena ara-tsakafo sy fananganana orinasa isam-paritra », hoy ny fanazavana.
Amin’ity andiany voalohany ity, hanomboka amin’ity herinandro ity, mpandraharaha madinika miisa 200, mpikambana amin’ny fivondronana sy fikambanan’ny tantsaha, izay ny PAM no nandahatra azy ireo no mahazo ny famatsiam-bola avy amin’ny Fihariana, ka ny banky BOA no handrindra izany. Ny PAM sy ny Fihariana no hanome tanana ireo tantsaha mpisitraka ireo amin’ny fampianarana amin’ny fitantanam-bola. Eo ihany koa ny fitarihana azy ireo amin’ny fampanarahan-dalàna ny asany sy ny orinasany. Ary indrindra amin’ny famarotana sy ny famoahana ny vokatr’izy ireo. Voalaza fa mbola any amin’ny 10.000 ny hisitraka tetikasa tahaka izao, fa fanombohana ihany ity any Atsimo ity.
Ny fanaovan-tsonia teo amin’ny PAM sy ny Fihariana.
FADINTSERANANA MALAGASY: Tafapetraka ny « Brigade Canine » hitsirika ny fanondranana antsokosoko
ANTSONJAY AMIN’NY AIR MADAGASCAR : Filam-boatsihary ny an’ny Frantsay !
FILOHA TAO VATOVAVY FITOVINANY : « Haverina ny lazan’ny vokatra tantelin’i Madagasikara »
TOHO-DRANO AO AMBOHITROMBY ANKAZOBE: Hanondraka tanimbary hatramin’ny 120 hektara
NOMERIKA ATY AFRIKA Anisan’ireo voafidy ho mpanorina sangany i Ratozamanana Harinjaka